Liverpool oo garoonkeeda Anfield saddexda dhibcood kaga qaadatay kooxda Arsenal… +SAWIRRO. - Hargeele - Wararka Somali State
Liverpool oo garoonkeeda Anfield saddexda dhibcood kaga qaadatay kooxda Arsenal… +SAWIRRO.
(England) 28 Sebt 2020. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa garoonkeeda Anfield saddexda dhibcood kaga qaadatay naadiga Arsenal, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-1, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada Isbuuca saddexaad ee horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 2-1 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Liverpoo.
Daqiiqadii 25-aad ee ciyaarta Arsenal ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 0-1 ka dhigay Alexandre Lacazette.
Balse 28 daqiiqo marka ay dheeshu aheyd Liverpool ayaa heshay goolka barbardhaca, waxaana 1-1 ka dhigay Sadio Mane.
Kooxda Liverpool ayaa la wareegtay hoggaanka ciyaarta daqiiqadii 34-aad, kaddib markii uu dheesha ka dhigay 2-1 Andrew Robertson, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Trent Alexander-Arnold
Daqiiqadii 88-aad kooxda Liverpool ayaa sii dheereysatay hoggaaminta dheesha waxaana 3-1 ka dhigay Diogo Jota.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 3-1 ay kaga adkaatay Liverpool kooxda Arsenal oo marti ugu aheyd garoonka Anfield, kooxda difaacaneysa horyaalka Premier League ee Reds ayaana guul gaartay kulankeeda saddexaad xiriir ah kal ciyaareedkan cusub ee 2020/21.
Video alleges widespread voter fraud in MN – TwinCities.com-Pioneer Press
Guardiola oo shaaca ka qaaday hamigiisa kooxda Manchester City ee xilli ciyaareedkan
Lionel Messi oo soo bandhigay maaliyadda saddexaad ee Kooxda Barcelona ay ku ciyaari doonto xilli ciyaareedkan 2020/2021